Bhulgariya - ALinks
Uyifumana njani i-visa eBulgaria?
January 10, 2022 UAntika Kumari Bhulgariya, ivisa
I-visa yaseBulgaria yimvume enikezelwa kwilizwe langaphandle ukuba ingene, ihlale okanye idlulele kwisikhululo seenqwelomoya. Unikezelo luya kupapashwa ngohlobo lokuncamathelisa oluqhotyoshelwe kuxwebhu lwangaphandle lokundwendwela okanye kolunye utshintsho endaweni yalo
Ngaba abemi baseIndiya bangaya eBulgaria? I-visa yaseBulgaria yamaIndiya
January 10, 2022 UAntika Kumari Bhulgariya, Ma Indiya, ivisa
Ngaba ubucwangcisela ukutyelela iBulgaria? Kodwa bekudida xa ufaka isicelo seVisa yase-Bulgaria yase-India. Fumana lonke ulwazi olufunekayo lwe-Visa yaseBulgaria, okt, Inkqubo, ukufaneleka, kunye namaxwebhu afunekayo kwiVisa yaseBulgaria. Ngaphambi kokungena kwiRiphabhlikhi yaseBulgaria,
Ungasifaka Njani isicelo seAsylum eBulgaria
Agasti 31, 2020 UAntika Kumari Bhulgariya, ababaleki
I-Asylum kuxa elinye ilizwe linika ukhuseleko kubantu abaziva bengakhuselekanga kwilizwe labo. Nabani na ovela kulo naliphi na ilizwe unokufuna i-Asylum eBulgaria xa esiva isoyikiso ebomini bakhe okanye kukhuseleko. Isicelo sokukhuselwa singenisiwe